သိမ်ဖြူငွေလဲစင်တာ တွင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဒေါ်လာလဲလှယ်ခွင့် ရှိသည်ဆိုတာ မမှန်ကန်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သိမ်ဖြူငွေလဲစင်တာ တွင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဒေါ်လာလဲလှယ်ခွင့် ရှိသည်ဆိုတာ မမှန်ကန်ပါ
သိမ်ဖြူငွေလဲစင်တာ တွင် မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ဒေါ်လာလဲလှယ်ခွင့် ရှိသည်ဆိုတာ မမှန်ကန်ပါ
Posted by moonpoem on Oct 17, 2011 in Myanma News, News | 18 comments
သတင်းများတွင် ရေးကြပြောကြသည်။ မြန်မာလူမျိုး၊မှတ်ပုံတင်ရှိသည်ဆိုပါက လွတ်လပ်စွာ ငွေလဲလှယ်ခွင့် ရှိသည်။ မဟုတ်ပါ လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မလွန်ခဲ့သော တစ်ပတ်ကငွေလဲရန် သွားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ၉ရက်နေ့ က ထပ်မံမွမ်းမံလိုက်သော ပြင်ဆင်ချက်ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတိုင်းငွေလဲလှယ်ခွင့်မရှိတော့ပါတဲ့။ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ ပြန်အရောက်တွင်လေဆိပ်မှပေးသော D-Formလိုပါသည်တဲ့။ ပြည်ပသို့ သွားရောက်ဖူးခြင်းမရှိသော မြန်မာလူမျိုးများအတွက်ကတော့ နိုင်ငံခြားငွေကိုင်ဆောင်ခွင့်လက်မှတ်လိုအပ်ပါသည်တဲ့။
ကျွန်မသည် နိုင်ငံခြားကို သွားဘူးသောသူတစ်ယောက်မဟုတ်သလို ၊ ပြည်တွင်းတွင်လည်း နိုင်ငံခြားငွေ
ကိုင်ဆောင်ခွင့်လက်မှတ်ကို လုပ်ဆောင်ထားသူ မဟုတ်ပါ။ ထို့ အတွက် ကျွန်မတပ်ခေါက်ပြီး ပြန်ခဲ့ရပါသည်။
ဒီကိစ္စမျိုးသည် မဖြစ်သင့်ပါ။ ဒေါ်လာသည် စိန်ထက်တောင် တန်ဖိုးရှိနေသည်လား။ လူတိုင်းပိုက်ဆံရှိလို့တောင်
ကိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မသည် ထုံးစံအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကို ပြေးရပါတော့သည်။
အဲတော့ .. အပြောနဲ့ အလုပ်မညီပါလားနော် … moonpoem လိုပဲ etone လည်း ဒေါ်လာကိုင်ဆောင်ခွင့်လက်မှတ်မရှိပါဘူး … သိမ်ဖြူမှာ သွားလဲ ကြည့်မလားတောင် တွေးနေတာ .. အခုလို သတိပေးတော့လည်း .. ဈေးနှိပ်ပေမယ့် ပိုက်ဆံပြည့်တဲ့နေရာမှာ လဲနေကြအတိုင်းပဲ လဲတော့မယ်
အပြင်ဈေးနဲ့ ဘယ်လောက်ကွာလဲသိပါရစေ….
အပြင်ဈေးနဲ့တော့ … တစ်ဆယ်ငါးကျပ်လောက်ပိုရပါတယ် .. အပြင်မှာပေါက်ဈေး 813 ဆိုလျှင် သူက 830ရတယ် .. ။ သူမှာ သွားထုတ်ရ အ ဆင်မပြေတာကြောင့် လူတွေ ဈေးကွာလည်း အပြင်မှာပဲ လဲကြတယ် .. အပြင်ကလူကလည်း …လျှောက်ဝယ်ပြီး .. သူတို့ ဆီမှာ ပြန်ရောင်း … ကြားက ကွာဟတဲ့ ပိုက်ဆံ သူတို့အတွက် ကျန်တယ်ပေါ့ အဲ့လိုချည်းလုပ်စားနေတာ .. မှောင်ခိုဈေးကွက်က ပို အင်အားတောင် တောင့်လာသေးတယ်
သွားလဲတဲ့နေ့ က အောက်တိုဘာ၁၁ရက်နေ့ ကပါ အပြင်မှာ ဈေး ၈၀၅ကျပ်ပေါက်နေတဲ့ အချိန် သိမ်ဖြူငွေလဲစင်တာမှာ
Sun Farမှာ လဲဖူးလား
ပန်ပန်ရေ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံနားက ငွေလဲပေးတဲ့သူတွေရိုက်ချက်ကတော့ပြင်းတယ်။ မျက်စိရှေ့ မှာတင် ပိုက်ဆံကိုရေပြတယ်။ ပြီးရင် ဒေါ်လာကတရားဝင်တာ မဟုတ်ဘူး မြန်မြန်ယူသွား အဖမ်းခံရမယ်ဆိုပြီး ပြော။
ရေပြတုန်းကပြည့်တဲ့ပိုက်ဆံက အိမ်ရောက်လို့ရေကြည့်ရင် ၅ရွက်လောက်လျော့နေရော။ မျက်လှည့်ပြသွားတာ။
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲက ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်တွေကတော့ စိတ်ချရသလိုပဲ။ ပန်ပန်ပြောတဲ့ Sun Far မှာတော့ မလဲဘူးသေးပါဘူး။
မဟာဗန္စုလ ပန်းခြံနားတော့ ယောင်လို့ ပိုရလို့ဆိုပြီးများ မလဲလိုက်ပါနဲ့။ လက်လှည့်လည်း အင်မတန် ကြွမ်းကျင် ကြပြီး ဘယ်လိုပြန်ယူသွားမှန်းမသိအောင် သွက်ကြပါတယ်။ လုံးဝမလဲပါနဲ့။
မြန်မာပြည်ဥပဒေများသည် စက်ကူစာရွက်ကဲ့သို့ ကြံခိုင်ပါ၏(လေတိုက်မခံ၊ရေစိုမခံ၊လေးနက်မှုမရှိ)
ေ၇ာက်ခဲ့တယ် FEC တောင်ရောင်းခွင့်မရခဲ့ပါ။
တစ်မျိုးတစ်ဖုံ စဉ်းစားကြည့်မယ် ဗျာ
အဲဒီနားမှာပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ လာလဲလိုက်
ဈေးတက်ရင် ပြန်ရောင်းလိုက်နဲ့ များ
လုပ်စားနေကြလို့ များလားလို့ ..။
နိုင်ငံသားတစ်ချို့ က ၊ အခွင့်အရေး တစ်ခု ကို
အိုးပင်းချပေးလိုက်ရင် မဆင်မခြင် ယူတတ်ကြတာကို
မြင်တွေ့ ဖူးနေလို့ ပါ ။ ( ဥပမာ ဓါတ်ဆီ )
အမှန်ဘဲ ။ ကျွှန်တော်လည်း အဲ့ ဒီ့ အကြောင်း ရေးမလို့။
နည်းမျိုးစုံနဲ့ ငြင်းတယ်။ အပြင်ဈေး နဲ့ ၂၀/၃၀ လောက်ကွာတယ်ဆိုတာလည်း ၁၀၀ တန်မှ ပါ။ အရွက်သေးဆို အပြင်ဈေးပါဘဲ။
စနေနေ့က အပြင်ဈေး ၇၉၀ .. သူတို့က ၈၂၀ နဲ့ လဲပေးတယ်။ ဒီနေ့ အပြင်မှာ ၇၇၀ ထိကျပြီး သူတို့က ၈၁၀ နဲ့ လဲတယ်လို့တော့ပြောသံကြားမိပါတယ်။
US 100 လောက်တော့ ကောင်တာ တစ်ခုဆီမှာ လဲလို့ ရလို့ ၆၀၀ လောက်တော့ အချိ်န်ုကုန်ခံ တန်းစီရင် လဲလို့ရပါမယ်။
အဲ့ဒါထက်များရင်တော့ မန်နေဂျာဝင်တွေ့ပြီး လဲရပါတယ်။ ပထမတစ်ရက်မှာ နိုင်ငံခြားငွေကိုင်ဆောင်ခွင့် လက်မှတ်ပါမှလို့ပြော လွှတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ကိုင်ဆောင်ခွင့် လက်မှတ်ယူလာတော့ အမည်ကိုယ်ပိုင် မဟုတ်လို့ မရဘူး ၊ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ပါမှဆိုပြီး မရပြန်ဘူး။
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ တစ်စောင်လုပ်လာတော့ ဘဏ်တစ်ခု က ၂၀၀၀ အထိဘဲလဲခွင့်ပေးပြီး အဲ့ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ မူရင်းသိမ်းလိုက်တော့ ကျန်ကောင်တာတွေက မိတ္တူဆိုပြီး မပေးဘူးလုပ်တာ လာလဲတဲ့ ကုမ္မဏီ ကောင်မလေးတွေက သုံးရက်ရှိပြီ ၊ ဒီနေ့ မှ မရရင်တော့ ကျွှန်မတို့လည်း အလုပ်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီး အတင်းပြောမှ နောက် ကောင်တာ သုံးခုက ၁၀၀၀ ဆီလဲခွင့်ရခဲ့တယ်။
ွှအဲ့ဒီတော့ များများလဲရန်လိုသူများ ..(၁) နိုင်ငံခြားငွေ ကိုင်ဆောင်ခွင့် လက်မှတ်ယူသွားပါ။ သက်တမ်းရှိပါစေ။ (၂) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ မူရင်းများ တစ်ထပ်ကြီး ယူသွားပါ။ (၃) မှတ်ပုံတင်မူရင်းယူသွားပါ၊ မိတ္တူဆွဲသွားပါ(မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ တောင်းမတောင်းတော့ မမေးကြည့်မိပါ၊လိုမည်ဟုယူဆပါသည်။) (၄) ထုံးစံအတိုင်း ခေါက်ရိုးမကျိုး မှင်စွန်းရာမပါ ရာတန်သစ်ပါစေ။
နောက်ဆုံးတော့ အဲ့ဒီငွေလဲနေရာ လည်း ဂိုဒေါင်ကြီးဘဲ ပြန်ဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အဲ့ဒီငွေလဲနေရာ လည်း ဂိုဒေါင်ကြီးဘဲ ပြန်ဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်…… htoosan ရေ ဂိုဒေါင်ကြီးကပဲကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်…….
အပြင်ထက်၂၀ပိုများတယ်လေ ကိုယ်လဲရမှာလဲ အမောင့်ကများတော့ များများပိုရအောင်ဆိုပြီးသွားတာ
ကျမလဲပထမတော့နားမလည်လို့ ဘဏ်ထဲဝင်ပြီး ၀န်ထမ်းကောင်လေးကိုမေးတာပေါ့
ကျမကလဲ သေချာရှင်းပြပေးပါလားဆိုတော့ ကျတော်လဲမရှင်းတတ်ဘူး ဒီအတိုင်းသာမှတ်သွားပါတဲ့
ကောင်းရောဘဲ အဲ့ဒါနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်လူတယောက်ရှင်းပြမှဘဲဘာတွေလိုတယ်ဆိုတာ
သိသွားတယ် ဒါပေမယ့်မလဲဖြစ်ခဲ့ပါဘူး သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုယ့်မှာမှမပါတာ
အဲဒီ သိမ်ဖြူငွေလဲမဟုတ်ပဲနဲ့။
ပေါက်ဈေးအမှန် ၊ အကြံအဖန်မရှိတဲ့
လိပ်စာ အတိအကျလေး ပြောပြပေးကြပါဗျာ။
ကျွန်တော် ငွေလဲဖို့လိုအပ်နေလို့ ပါ ။
အားလုံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်
SUN FAR မှာသွားလဲပါ
ဒါပေမယ့် အပြင်မှာလိုမဟုတ်ဘူး၊ ငွေအတွက် စိတ်ချရတယ်၊ ဈေးလည်းမှန်ပါတယ်
ကြားရက်တွေဆို ၃နာရီလောက်ထိ လဲလို့ရမယ်ထင်တယ် (ဒါမှမဟုတ် ရုံးဆင်းချိန်ထိလားမသိ၊ စောစောသွားတော့ ကောင်းတာပေ့ါ )
Summit Park View Hotel မှာ လည်း စုံစမ်းကြည့် ပါ။ အဲ့ဒီ့ ဟိုတယ်က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရ လိမ့် မယ်။ ခွက် နိုင်ငံခြား သား အချင်းချင်းပြောရင် အဲ့ ဒီမှာ လဲ။ ဈေးမှန်တယ် . စိတ်ချ၇တယ် ဆိုပြီး ညွှန်းကြပါတယ်. ကိုယ်တိုင်တော့မလဲဘူးပါ။